Corporate Inkcubeko - Shanghai SOG neeMpompo Co., Ltd
SOG C orporate M ission: lonke ilungu SOG baphile ubomi obungcono.
Gcina ukuphucuka okuqhubekayo ubuchule nokuxabiseka nabasebenzi 'kwingongoma ezintandathu, umsebenzi, ukukhula, ubutyebi, usapho, ezempilo, uthando kunye dedication.Let lonke ilungu SOG ukufumana ulonwabo kabini ngokubini obo buphathekayo kunye umba ngokomoya.
SOG C orporate V ision: Yakha omhloniphayo lweshishini
★ gqolo ukunika "ekumgangatho ophezulu, ukusebenza phezulu, ixabiso eliphezulu yokusebenza" imveliso nempompo; Ukubonelela ngeenkonzo ukuba ngaphezulu kokulindelwe abathengi 'kwaye ukudala ixabiso elikhulu kubathengi.
★ Yibani inkampani kakhulu enomtsalane emehlweni abasebenzi, kwaye abasebenzi ezibalaseleyo kunye namaqabane baba co-amahlakani.
★ Yibani "China ofanele-trust isisombululo pump lwengcali", igalelo kuphuhliso loshishino pump!
★ Sizimisele ukukhuthazwa kwenkcubeko Chinese yesintu nemfundo ntle yoluntu, benze iminikelo nokuzalisekisa kwephupha Chinese!
SOG Core Ixabiso: Ukuzikisa, ezintsha, ukuthembeka, isenzo, PK
SOG Usukelo Corporate: isicwangciso sokuqala seminyaka emihlanu ukususela 2017-2021
2018: Ukugqitywa ulwakhiwo lombutho ukufunda
2019: Ukugqitywa le collectivization ka SOG.
2020: Kusekwe omnye umsebenzi-iqela kungekho ngaphantsi kwe-60 people.Train ngaphezulu kwama-20 "imikhosi oqeqeshiweyo ezizodwa" kunye nabaphathi jikelele 10; Train ngaphezu kwe-10 we-amaqabane abo ingeniso yonyaka ngaphezu 300,000 RMB; kunye imali yonyaka onke amalungu SOG idlula 100,000 isikali ishishini RMB.The ifikelela RMB 100 million.
2021: Total ukuphuhlisa namaqabane eqhinga ngaphezulu kwama-30, ukubanceda ukuba ukuqeqesha i-100 "iingcali kwishishini". Iyonke phezu 350.000 RMB ziya kuphiwa wemisebenzi ntle yoluntu
Zama ukuba bazalise icandelo sponge yeqela SOG angene kwimarike phambi 2021.
Customer kuqala, abasebenzi kuqala;
Iyangqinelana ngamazwi nangezenzo
Ungaze yokuthenga elizayo iinzuzo zexesha elifutshane
Thembeka kwaye baphile ngesidima